Izindlela zabantu besilisa zokuphuza ukuqeda embhedeni
Izinkinga zokusheshe uqede embhedeni
Kule Chapter sizobheka izinkinga zamadoda ekamelweni. Uma uyindoda udinga ukuhlala isikhathi eside embhedeni ungasheshi ukuqeda. kumele uqede owakwakho eseqedile, abantu besifazane-ke bayaya kuvuthwandaba bephindelela kaningi, uma beya bephindelela lokho kwenza beneliseke embhedeni. Kanjaloke nabantu besilisa bayakwazi ukuya bephindelela kuvuthwandaba kodwa induku ingawi, lokho uzokufunda khona lapha kule-website.Inkinga yasembhedeni uyadinga impela ukuyisukumela, ibamba iqhaza elihle ekuphumeleleni kothando.
Ziningi izizathu ezenza abantu besilisa basheshe baqede, kulezozizathu kubalwa nalezi ezilandelayo:
Ukungadli ukudla okunempilo eyanele, umzimba wonke ukuze usebenze kahle udinga ukuthi udle ukudla okunezakha mzimba.
Izifo, Ziningi izifo eziba segazini ezenza ungachithi isikhathi eside embhedeni, ezinye zalezifo azikwenzi ukuthi ugule, ngaleyondlela ngeke wazi noma unazo yini lezifo ingakho kukuhle ukuya kudokotela wezitho zabantu besilisa , ngesingisi babizwa nge-Urologist
Izinkinga zothando, Ngesinye isikhathi uma uthando lunezinkinga , lezozinkinga zingenela nasembhedeni, uthole ukuthi induku ayisabi nawo umdlandla. lokhu kujwayelekile uma kunokungezwani othandweni, noma lapho intombi ike yafeba khona
Ukukhathazeka ngokomqondo, Kujwayelekile ukuthi uma unezinkinga ezikukhathazayo empilweni, lezozinkinga ziyashintsha indlela owenza ngayo embhedeni. isibonelo: uma unezinkinga zezimali noma emsebenzini ungajabule.
Ukuba sensitive kwenduku, Kuyenzeka ikhanda lenduku libe-sensitive kakhulu lokho kuyaba nomphumela wokuthi indoda isheshe iqede. Uma inkinga kuyileyo kumele usebenzise ijazi lomkhwenyana njalo uma uya ocansini.
Ngezansi ngama chapters azokusiza uvuse umuzi wakho
Ama-movie ocansi, ukuchatha, yi diet
Ukudla okuthile, ukusoka kanye ne nabo cream
Ukudla okuthile, utshwala namaphilisi
Ukwenza ucansi uphindelela kanye ne Tantra
Ukujimisa induku yakho